Iraq Archives - Page 2 of 2 - Sawirrotv
Howlgalka Dib u Xoraynta Magaalada Mosul oo Galay Maalintii Sadexaad (VIDEO)
October 19 , 2016 – Howlgalka magaalada Mosul ee dalka Ciraaq, ayaa waxa uu maanta galay maalintii sadexaad ee dagaalka la doonayo in dib loogu xoreeyo magaaladaasi. Magaalada Mosul oo ku taalo waqooyiga dalka Ciraaq ayaa waxaa iminka gacanta ku haya dagaalyahanada Ururka Daacish/ISIS oo magaaladani ka ariminayay labadii sano ee u danbeysay. Mosul ayaa ah …
Ciidamada Dalka Ciraaq oo Sheegay inay la wareegeen Deegaano Badan oo ay Gacanta ku hayeen DAACISH (VIDEO)
October 18 , 2016 – Ciidamada dalka Ciraaq ayaa sheegey inay ururka Daacish kala wareegeen Tuulooyin ku xeeran magagaalada Mosul oo ah goob ay isugu geeyeen ciidamadoodii iyo xoogoodii. Magaalada Mosuul ayaa waxaa weerar labo jiho ah uga soo qaaday ciidamada Milatariga dalka Ciraaq iyo maleeshiyaadka ciidanka Peshmerga oo gabi-goodba ka kooban dagaalyahano Kurdiyiin ah. …
Dagaalka Magaalada Mosul oo Xawli ku Socda iyo Ciidamada Xulufa oo La Wareegay Deegaano Horleh (VIDEO)
October 18 , 2016 – Ciidamada dalka Ciraaq oo taageero ka helaya ciidamada Xulufada oo uu Maraykanka hogaaminayo, ayaa waxay gaareen afaafka hore ee Magaalada Mosul ee Waqooyiga dalka Ciraaq, waxa ayna la wareegeen Deegaano badan oo ku xeeran magaaladaasi. Mosul ayaa ah xarunta ugu wayn ee Ururka Daacish ay wali kaga sugan yihiin dalka …
Dagaalkii Ururka Daacish looga Saari Lahaa Magaalada Mosul oo Xalay Bilaawday (VIDEO)
October 17 , 2016 – Ciidamada dalka Ciraaq oo taageero ka Helaya diyaaradaha Dalka Maraykanka iyo Xulufadiisa ayaa xalay weerarkii ugu weynaa ku qaaday magaalada oo ay gacanta ku hayso Urarka Daacish. Ra’iisul wasaaraha dalka Ciraaq, Haider Al Abadi, ayaa xalay shaaciyay in uu bilowday duulaanka milateri ee ururka isku magacaabay dowladda Islaamiga looga saarayo …
Qarax aad u Xoogan oo Saaka Aroortii ka Dhacay Magaalada Baqdaad ee Dalka Ciraaq (VIDEO)
July 03, 2016 – Saaka subixii hore ayaa Gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa waxaa lagu weeraray goobo mashquul badan oo kuyaala Magaalada Bagdaad ee caasimada dalka Ciraaq, waxaana weerarkani ka dhashay qasaaro badan oo isugu jira naf iyo maal. Weerarkan ayaa ka dhacay goob ay ku yaalaan xarumo ganacsi oo ku yaala xaafada Shiicada …
June 30, 2016 – Maleeshiyaadkii ISIS (Daachsh) ee la dagaalamayay ciidamada dalka Ciraaq ee ku sugnaa magaalada Fallujah, ayaa waxaa la soo bandhigay muuqaal muujinaya sidii loo weerary markii ay damceen inay habeen madow isaga guuraan magaalada. Ciidamadan ka tirsan Ururka ISIS ayaa la sheegay inay gaarayeen boqolaalo, waxayna siteen gawaari lagu qiyaasay ilaa 70 xabo, waagii …
Dowladda Ciraaq oo Sheegtay Inay la Wareegtay Gacan ku Haynta Magaalada Faluuja (VIDEO)
June 27, 2016 – Ra’iisul Wasaaraha Dalka Ciraaq Haider al-Abadi ayaa kun dhawaaqay in Ciidamada dowladda dalkaasi ay la wareegeen gacantana ku dhigeen gabi ahaanba magaalada Faluuja oo 50KM u jirata Caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdad. Haider al-Abadi ayaa hadalkani ku dhawaaqay goor uu booqasho gaaban ku gaaray magaalada laga xoreeyay ururka Isis ee Faluuja, Ciidamada …
Ciidamada Dowladda Ciraaq oo Sheegay Inay la wareegeen Magaalada Faluuja (VIDEO)
June 18, 2016 – Ciidamada dalka Ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in shalay oo Jimco ahayd inay si buuxdo ula wareegeen gacan ku haynta Bartamaha Magaalada Fallujah oo 65 Km u jirta caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad. ka dib dagaal afar toddobaad socday oo ay kula jireen Ururka Daacish. Ciidamada Ciraaq oo taageero dhinaca cirka …